Ukuhleka kweLotus kuvula iBandla leYoga eNew Orleans - Indlela Yokuphila
Eyona Indlela Yokuphila Eyona Studio yeElectlectic Yoga eBrooklyn isiya eNew Orleans
Eyona Studio yeElectlectic Yoga eBrooklyn isiya eNew Orleans
UDana Trixie Flynn phambi kweLotus entsha ehlekisayo.Ngobubele Ukuhleka kweLotus
Ukuhleka kweLotus kwavotelwa eyona studio ye-yoga eclectic kuyo yonke idolophu yaseNew York-kwaye ngoku yenza indlela eya eNew Orleans. Ngoninzi lweeklasi ezenzelwe umntu oza kum-mat-to-mat ezabanjwa kwii studio zabo zaseManhattan, eWilliamsburg naseSan Francisco, ulwandiso lwalungenakuphepheka. Ngelixa indawo yayimangalisa (kuba isixeko asiyiyo i-mecca yomzimba) ubambiswano lwenza ingqiqo nakubani na owakha wamamela i-harmonium eLaughing Lotus okanye uthathe inxaxheba kumgca wesibini eNew Orleans.
Icawa yeYoga, evula uFebruwari 11, ihlawuliswa njengendawo yomnyhadala kunye nokuthandaza, ikhatshwa ngumculo weendaba ezilungileyo ngeCawa (kunye neehangovers, kucingelwa) I-glitter bar yabo, apho abafundi banokuthi banxibe imizimba yabo ngaphambi kweklasi, iya kwenza ingqiqo ngakumbi eNew Orleans-ngakumbi ixesha lomnyhadala.
Ukuseka umsunguli weLotus uDana Trixie Flynn ebetyelele iNew Orleans ukusukela ngo-1992, okoko waqala indlela yokuwela iMelika. Kutyelelo lwakutshanje, watsaleleka kwiCawa yaseBhaptizi eyayonakaliswe kakhulu yinkanyamba uKatrina; Uye wagqiba kwelokuba aguqule eso sithuba sibe yiCawa yeyoga.
Umbonisi wathetha noFlynn ukuba afune ukuba kutheni ekhethe indawo ekuyo iTreme kunye nokuba abafundi bangalindela ntoni kwimodeli yakhe yokuyihlawula. UFlynn kunye nomculi we-NOLA u-Little Freddie King.UNousha Salimi
Yintoni ekutsalele eNew Orleans? Kwakuyimpelaveki yePasika ukufika kwam eNew Orleans, kwaye ndandiwuva umphefumlo wam ukuba uvela apha. Bendiqala ukuza eNew Orleans okoko bendisenza iyoga- ngaphezulu kweminyaka engama-25.
Usikhethe njani isithuba? Umphefumlo wam wawunqwenela ukuchitha ixesha elininzi apha, njengoko ndithanda ukufudumala kwabantu kunye nendlela ekuhlala kusenziwa ngayo umculo emoyeni. Ndacinga ukuba mhlawumbi ndingathenga indlu encinci apha… emva koko icawe yandifumana. Ndizamile ukungayithengi, kodwa yayilubizo lokwenyani lokunxibelelana nzulu kwesi sixeko sikhulu kwaye ndibuyisele usapho olunomphefumlo apha.
Luhlobo luni lomsebenzi olufuna isithuba? UKatrina wayonakalisa kanobom icawa, kwaneentubi. Kwakufuneka sakhe isakhiwo esitsha ngokupheleleyo ngaphakathi kulwakhiwo lwezitena, sayithatha sayokutsho ezantsi kwizitokhwe. Andizange ndiyazi ukuba iya kuba yinto enkulu yokwakha.
Ngaba ukhathazekile kukuba iNew Orleans ayisiyo kanye isixeko esaziwa njenge-mecca yomzimba? Siliziko loluntu (elingenzi nzuzo 501 (c) 3) kuqala nokuphambili. Umculo uza kuhlala ecaleni kweyoga kunye neendlela zayo zotshintsho. Luhlobo olwahlukileyo lwemecca. Icawa yeyoga kwi-1480 yesitalato iRocheblave Street.UNousha Salimi
Iya kuba yintoni le studio eya kuthi ngqo kwiNew Orleans? Sakhe iqonga leemvumi kwaye uLittle Freddie King ukhaba ukuvulwa kanye ngexesha likaKrewe du Vieux. Xa ufika eklasini eCaweni, isimahla kuba omnye umntu uyihlawulele iklasi yakho, kwaye xa uphuma mhlawumbi uyabhatala wenze ukuba kwenzeke ukuba omnye umntu abe neyoga. Awuhlawuli wena, uhlawulela omnye umntu.
Ziphi ezinye zeendawo ozithandayo ukutyelela eNew Orleans? Ndiyayithanda ibayou, uMlambo iMississippi, isitalato samaFrentshi, igadi eqingqiweyo, iCandlelight Inn eTreme, iSatsuma Café, ngoLwesine ebusuku jazz yasimahla eLouis Armstrong Park… Ndiyawathanda amagama ezitalato, imfihlakalo, umnqweno kunye nomculo. Umzimba wam wazalelwa eSan Francisco, kodwa umphefumlo wam uvela apha.
I-Radio Duo ethathe indawo yodliwanondlebe lweDon Imus Amazwe eTrump Udliwanondlebe ngeVeki yokuQala eMoyeni
I-Penthouse elahliweyo kaMary-Kate kunye no-Ashley Olsen iseyingxaki
Iiresiphi zeblue apron kwiveki ephelileyo
ukufundwa simahla kwengqondo ngomnxeba akukho makhadi etyala
esona sitshisi sigqwesileyo emhlabeni
elona nqanaba liphezulu lokuthoba ubunzima
eyona ndawo yokuthenga umphunga
endibizele iziphumo zasimahla